२ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री मनिष कि जितेन्द्र ? | Ratopati
Home रातोपाटी 2018-10-21T09:49:35.178941+05:45
२ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री मनिष कि जितेन्द्र ?
काठमाडौं–अति चर्चामा रहेको २ नम्बर प्रदेशमा राजपाका मनिष सुमन र जीतेन्द्र सोनलको नाम चर्चामा छ । मंसिर २१ मा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएसँगै यी २ नेता मुख्यमन्त्रीको दौडमा सबैभन्दा अघि देखिएका हुन् ।
मनिष सप्तरीको क्षेत्र नं २ को ख प्रदेश सभाबाट ८ हजार ९ सय ३०९ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् ।
यस्तै सोनल वारा क्षेत्र नं ४ को ख बाट १३ हजार १ सय १८ मत ल्याएर विजयी भएका हुन् ।
उनीहरुले मत माग्ने क्रममा मुख्यमन्त्रीको रुपमा अघि नसारी समृद्ध मधेशको नारा नै प्रमुख बनाएका थिए । संविधान बनेपछि आन्दोलनमा उत्रेको मधेश बल्ल बल्ल शान्त भएको छ । आन्दोलनबाट भएका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्ने सबै भन्दा सुर्वण अवसर अहिले मिलेको छ ।
कृषि र उद्योगधन्दाहरुको प्रमुख रहेको २ नै प्रदेशको विकास र समृद्धि अन्य प्रदेश भन्दा छिटो हुनसक्छ । तर कयौ क्षेत्रमा यो प्रदेश सुगम भएपनि पछाडि परेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा यो प्रदेश कयौं पहाडी प्रदेश भन्दा पछाडि देखिएको छ ।
अहिले सम्म राजधानी काठामाडौंले पछाडि पारेको विश्लेषण गर्ने मधेशवादी दलका नेताहरुको हातमा मधेशको वागडोर आएको छ । अबको पाँच बर्षमा मधेशको भाग्य र भविष्य बदल्ने जिम्मा पाएका नेताहरुले अब व्यवहारमा नै देखाउने सयम आएको छ ।
यसमा मनिष सुमन र जितेन्द्र सोनल जसले मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व पाएपनि मधेशका पीडालाई सदाको लागि हटाउने चुनौति र अवसर दुबै रहेको छ ।